sida loga abuura dumarka jeceyl | Gaaloos.com
Home » galmada » sida loga abuura dumarka jeceyl
sida loga abuura dumarka jeceyl
Waa dhacda guurka kabacdi inaad ka xiiso dhacdo ninkaga/haweentada, maahmaah ayaa oraneysa 'Qof hadaa rabtid inaa baratid la safar ama la noolow'. Si kastoo aad isku jecleydeen waxa la kulmeysan wax aad ku murantan oo labadiinaba idinka xanaajiya sabab’na u noqda inaa waraaq kala goosatan. Ha ugu weynaato nolol maalmeedka hana ugu yaraate hadal midkiin kasoo fakada oo micno saasa ku fadhin, iyo maseer aan meel loo raaco laheyn. Hadaba maxa ku dhaca jaceylkii sababey inaad is guursataan?
flagJaceylka ma buubaa?
Ma baalal buu leeyahey sidi shimbirti, runtii haa, hadii lugu dagdago. Hadaadan khidad laheyn oo adan sii qorsheyn sida aad u waajihi laheyd dhibaatada guurka fashilisa. Hadaadan ka fiirsan oo aadan hubsan inaad lamaanahaaga jeceshahey asna sidoo kale ku jecelyahey, ogow isku si wax ma u jeclaano hadanu nahey bani’ aadam.
flagHooyo iyo Aabe 50 sano is qabaan…
Badanaa waxa ku eedeyna waalidkeen hada Somali nahey ineysan isku guursan jaceyl oo ey kaliya rabeen iney qooys iyo ilmo yeeshan. Hadaa ku dhaho Walidkeey oo waligood murmaya ama hadal aan wanagsaneen is dhahaya maaan arag. Hadaba see beey u dhactey ineey noloshaas ku nooladan, dhibkasto la soo gudbonaata ma jaceyl bey ugu wan qaleen ama ilmahooda?
Had iyo goor waxyaabaha sababa in leysku dhaco waxey imaadan marka uu ilmo dhasho. Aabaha reerka ayaa u maleeya in haweeneydiisi eey sugeysay oo kaliya in cunug hesho. Wuxu u qaata in asaga booski ka baxay oo nin kale guriga u dhashtay. Taasoo run ah hadeysan fahansaneyn xaaskiisa in asaguna u baahanyahey daryeel iyo il ku heyn. Aabaha marku intaas dareemo ayuu bilaaba inuusan wax badan guriga imaanin taasoo ku dhalisa maseer aad u weyn haweeneydiisi kaga mashquushey ilmaha dhallaanka ah. Ka dib waxa bilaabma in muran ayaga ka dhex bilaabmay lugu eedeeyo dadka ugu dhow oo noloshooda ka war haya ama asxaabta lala yahay.
Waqti yar kabacdi ayaa labadii qof oo is jeclaa oo wacad ku kala qaday wax kastoo dhex imaada ineysan kala tageyn ayaa tartiib usi kala fogaada. Waa ku jeclahey, maxaa ku qabta, iyo xiisihi leysku qabay oo yaraada. Waa kaloo sababa in leysku dagdago, tan waxa sabab weyn u ah muuqaalka qofka oo zaa'id kusoo jiita taaso niyadadu damacdo in muuqaalkas kaa qancin karo dabeecad iyo dhaqan kastoo qofkaas leeyahey. Runti hadaa u hadlo TV waxa ka jeclhey dad badan, Shahrukh Khan ba ha ugu horeeye, laakin suaashu waxey tahey ma iskeeni karnaa? Haduu qofka jeceshahey iyo adiga eydaan is keeneynin waa adagtahey inaa sariir qeybsatan. Marka isla noolaanshihna wax qiima ah kuma fadhinaayo haduusan jirin jaceyl iyo is adeecid.
flagMaxa Xal ah?
Kumanaan buug aya looga hadlay jaceylka guurka kabacdi iyo sida loo sii wadi lah. Saaso tahey wali dad badan ayuu mugdi kaga jira, ma buugtas ayaa qaladan ama anaga, wa maxay sababta ka dambeysa dadka ku aflaxa jaceylka guurka ka dambeeya? Aabe iyo hooyo camal. Runta ayaa ah ineysan buugtas waxey ka hadlayan eysan qaldaneyn, ama lataliyaasha guurka eey wax aan saxneyn kula taliyaan lamaane kasta oo u taga. Hal mid ayaan sahlana oo ah in bani' aadamku uusan isku si wax u jeclaan isku hal luqad jaceylna ku hadlin. Aan ku fahansiiyo qodobkaan ula jeedo halkan. Hadaanu fiirino Luqadaha dhankooda, badankeen waxa ku hadalna luqada meesha aan ku kornay oo ah tan hooyo iyo aabe ku hadlaan. Hadaanu rabno inaa luqad dheeri ah barano waxey nagu qadata waqti iyo dadaal badan, marnaba ma noqoto ama mala sinaato luqadeena hooyo oo asaasi noo ah. Hadaanu isku dayno inaa la hadalno qof aanan isku luuqad aheyn waxa yaraada awoodena hadal markaas ayeynu isticmaalna gacmaha ama sawiro oo aan is tusino saan isku fahano.
Luqada jaceylku waa sidaas oo kale, sida Somaliga uga duwanyahe luqadaha kale ayuu qof kaste jaceylkisu uga dawanyahe dadka kale, oo kiisa ayaa asaasi u ah kuwa kalena luqad labaad uu bartay ayey u noqoneysa, waxeyna ku qaadaneysa waqti iyo dadaal inuu qof kale jaceylku ku hadlo barto. Qof kaste si gooni ah ayuu ugu hadlaa marka waa inaad barata oo darasta qofka nolosha la qeybsaneysid qaabku ugu hadlo, si aad ugu yaraan u fahanto. Tusaale aan ku siiyo, wiil aan saaxiib nahey oo aan la sheekeysanaye maalmo ka hor intaan sheekadan qorin ayaa igu dhahey si kaste inuu isku dayey suu u dhaho ‘waa ku jeclahey’ gabar uu jeclaadey. Laakinse ayadu eysan fahmin, markaasu ku tilmaamay iney doqon tahey. Waxan weeydiye, iney hadaladiisa cadiga ah fahanto marku la hadlaayo, wuxu ku jawaabay ‘haa waa fahanta waana qof qosol iyo kaftan badan’. Markaas ayaan ku dhahey si kaftan ah ugu dheh. Maalmo kadib ayuu isoo wacay, asagoo ii weydinaya sirta ku jirtay, waxaan ugu jawabay baro luqada jaceylkeeda. “Kalmadas aya igu dhalisey inaan qoro Maqaalkan” Aqriste qofka aad jeceshahey lahjada uu ku hadlo baro.
Title: sida loga abuura dumarka jeceyl